रवि लामिछाने पक्राउपछि हुनुपर्ने बहस के हो?
टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने। फाइल तस्विर
‘रिपोर्टरलाई दौडाउने र त्यसैको बलमा आर्जित जनविश्वासलाई दुरुपयोग गरेर तस्कर र माफिया गिरोहसँग पैसा असुल्ने धन्दा रविले चलाएका हुन् कि होइनन्? भनिन्छ डेथ डिक्लिरेसनमा मान्छेले झुटो बोल्दैन। त्यसैले यो छानबिन हुनैपर्ने अर्को विषय हो।’
२०७४ को माघ महिनाको चिसो साँझमा म महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट बाहिर निस्केर घर फर्किन नेपाल यातायात कुरिरहेको थिएँ। छेउको फार्मेसीमा दुई महिला औषधिको विषयलाई लिएर पसलेसँग चर्काचर्की गर्दै थिए।
‘यो औषधि हामीलाई नचाहिने भयो, पैसा फिर्ता दिनुपर्छ’, ती महिलाको तर्क थियो।
पसले मानिरहेका थिएनन्। ‘पैसा फिर्ता दिन मिल्दैन, अर्कौ कुनै औषधि लैजानोस्’, उनी भन्दै थिए।
‘पैसा फिर्ता नदिने भए अहिले रवि लामिछानेलाई फोन गरिदिन्छौं’, दुवै महिलाले एकै श्वरमा पसलेलाई चेतावनी दिए।
वादविवाद सकिएकै थिएन। मेरो नेपाल यातायात आइहाल्यो। म गाडी चढेर कपनतिर लागेँ।
पत्रकारिताको विद्यार्थी भएका कारण केही वर्षयता मैले पटक–पटक रवि लामिछानेबारे प्रश्न सामना गरेको छु। मेरा धेरै साथीहरु उनको पत्रकारिता शैलीप्रति प्रश्न गर्छन्। त्यतिबेला मैले यही माथिको प्रसंग सुनाउने गरेको छु। भन्ने गरेको छु, ‘रविले उठाएका मुद्दा आम सर्वसाधारणसँग जोडिएका विषय हुन्। तिनलाई उनले आवाज दिएका हुन्।’
प्रहरी प्रशासन, अदालत र सरकारमाथिको विश्वास उठिसकेका बेला न्यायका लागि पत्रकार सम्झिने अवस्था पत्रकारितामाथिको भरोसा पनि हो। रवि या अरु कोही सञ्चारकर्मीले आमनागरिकको विश्वास जित्नु प्रकारान्तरले पत्रकारितालाई माथि पुर्‍याउनु नै हो। यद्यपि रविको पत्रकारिताको शैलीप्रति मेरो केही बिमति थिए र छन्।
सामाजिक मुद्दाको सिधा उठान
रवि लामिछानेको सम्पत्तिको स्रोत के हो?
प्रकाशित: August 18, 2019 | 14:01:23 भदौ १, २०७६, आइतबार